Luuqadda Jirka: Wax Ka Baro Siraha Qarsoon ee Dunida Ficilka | Xaqiiqonews
Luuqadda Jirka: Wax Ka Baro Siraha Qarsoon ee Dunida Ficilka
Luuqadda jirka waa qeyb muhiim ah oo ka tirsan wada xariirka, muhiim ma ahan waxa ku hadleyso, balse waxaa muhiim ah sida aad u hadleyso, waxaana laga yaaba in habdhaqankaada uu badalo macnaha dhabta ah ee sheekadaada, sii mowduucaan aad wax ugu fahanto aqri faafaahinta.
Jirkeena waxa uu leeyahay luuqad u gaar ah, waxaa laga yaabaa in erayada ay yihiin kuwo dabacsan, balse waxaa xumeyn kara luuqadda jirka. !
Halkaasi waxaan ka fahmi karna muhiimadda ay arintani leedahay- si aanan u qaribin noolasheena, iyo tan bulshada.
Qaar ka mid ah luuqadda jirkeena iyo waxa ay ka dhigan tahay
Indhaha oo aadan fiirin karin : hadii qofka aad la kulmeyso aadan eegi karin indhahiisa si toos taasi waxa ay ka tarjumeysaa kalsooni darro.
Dhulka oo aad fiiriso: hadii adiga oo la kulmaya qof, ay kugu badato dhul eegista, taasi waxa ay ka dhigan tahay in aad cabsaneyso ama dambi aad qarineyso.
Indha Ku xadis: hadii aan badino indha ku xadisteena qofka aan la sheegeysaneyno ama walax un, taasi macnaheedu waxa ay tahay ka helitaan ama xiiseyn.
In aad fiiriso kor ama midig: tani macnaheedu waa in aad wax soo xasuusaneyso.
Bu,ada isha oo aad loo kala furo: tani waxa ay ka tarjumeysaa daneyn aad u heyso sheyga aad fiirineyso.
Hareeraha oo la fiiriyo: luuqaddani waxa ay tusineysaa in aan ka daalnay sheekada qof inoo waday
Qaar ka mid ah qaladaadka luuqadda jirka inta lagu guda jiro kulanka qof aan la leenahay
-Saacadda oo la fiiriyo: marka aad la hadleyso qof hadii ay soo noq noqoto saacad fiirintaada, taasi waxa ay tuseysaa ixtiraam la,aan, iyo dulqaad la,aan, waana fariin muhiim ah oo sheegeyso in ay jiraan waxyaabo kaga muhiimsan kulankani.
-Salaan Gacan qaad hooseeya: hadii gacan qaadkaada uu yahay mid hooseeya waxa ay ka tarjmeysaa kalsooni darro.
-ku dhawaansho xadgudub ah: hadii aad u dhawaato qof wax ka yar (hal cag ama cag nuskeed) tani waxa ay tuseysaa ixtiraam la,aan ama in aadan fahmeynin fogaanta lagugu tala galay, tani waxa ay qofka ka dhigi doontaa mid aan dareemeynin raaxo marka uu kula joogo.
ugu danbeyn, ka fogow qaladaadkan marka aad kulamada ku jirta si aad sare ugu qaato hagaajinta xiriirada aad la leedahay dadka kale.